Grid ubi EA - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeFree Forex EAsGrid ubi EA
Nke a bụ FREE VERSION nke Grid ubi EA! Ebumnuche dị iche iche maka ụdị zuru ezu, nanị njedebe bụ ọnụ ọgụgụ nke ọnọdụ.
Ya ihe mgbaru ọsọ bụ ubi kasị pụta trending ahịa (na akpaka mode) aghọgbu degharịa na-ewu ewu. The Forex Expert Advisor nwere ike na-eji site ahụmahụ ahịa na ntuziaka trading. Nke a na ụdị usoro a na-eji ọtụtụ ihe ịga nke ọma na-elekọta mmadụ na-azụ ahịa na-enwe n'elu 500 ugwo debanyere aha.
Ikpokọta gị trading ahụmahụ na a akpaka atụmatụ! O nwere okporo maka GBPJPY na bụ mfe scalable na ndị ọzọ ego.
I nwekwara ike iru okporo na gị onwe gị site na ọkọ!
Usoro nke a Grid ubi EA na-akwado na-akwụsị ọnwụ nhọrọ. Ị nwere ike iji hara nhatanha dabeere nkwụsị ọnwụ ọnọdụ pasent nke hara nhatanha na-echebe n'otu azụmahịa.
Nwaleenụ ya na GBPJPY 06.2012 - 11.2013 mgbe ọ bụla timeframe (ọ bụla akọrọ).
Ndị ọzọ abụọ: CHFJPY, EURJPY, CADJPY, USDJPY.
Nwere ike na-anwale na ihe ọ bụla ọzọ ego ụzọ na a Trending ahịa (atụ, GBPUSD 06.2013-11.2013) ma ọ bụ oscillating ahịa. Mma ga-eji ọzọ uko okporo on GBPUSD ma soro ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ bụghị usoro oscillation. Jiri usoro oscillation mee ihe na 8-16 ka ọ gaa gburugburu.
Onye ọkachamara ọkachamara dị mfe ịhazi. Nhọrọ niile nwere ogologo nkọwa na-enye ihe atụ nke ihe a ga-arụzu na nhọrọ ụfọdụ.
-Aghọ a ihe ịga nke ọma mgbaàmà na-eweta na tọn ndebanye aha ma ọ bụ nanị ahia gị onwe gị na akaụntụ na-eme ka nnukwu uru na a maara nke ọma usoro.
Ụdị JPY dị mma maka ịzụ ahịa na akpaghị aka dị ka Japan na-eche ihu na ndabara ma na-emefu ego ya (ma ọ dịghị eme ka ihe ịga nke ọma).
Usoro ahụ nwere ma ọ bụ MetaTrader 4 na MetaTrader 5.
Download Free Grid ubi EA